कैलाशको कुटी: रामैरामको दाबेदारीले ल्याएको खुशी
Posted by कैलाश at 5:54 PM
मैले बुझ्न नसकेको कुरो, एकै जातका लाग्ने अनि एकै क्षेत्र का व्यक्ति उठेकाछन्, राष्ट्रपतिको लागि । म छक्क यसअर्थमा परेको छु कि, मधेसी उठे भने समावेशी हुँदोरहेछ ।
बल्ल समावेशीकरण को अर्थ बुँझे !
Well siad Aakar bro!
मलाई पनि ज्ञान प्राप्त भो !
बडा नाटक बुझ्न कठिन हुन्छ नै यसैपनि र यहि नबुझेको कुरोबाट गहिरो कुरो आकारजीले बुझाउनु भयो । गज्जब छ हाम्रो देश र यसको राजनीति ।
नाटक भनौ या जे भनौ, यो त सानो भन्दा पनि सानो अंश मात्रै हो भन्ने कुरा त दुईदिनमै बुझीहालियो नि। यहाँ खुशी व्यक्त गर्ने व्यक्तिको आसय चाहिँ निकै नै व्यक्तिगत र भावनात्मक तवरले सिर्जित भएकोले एकलकाँटे देखियो। र पहिलोपल्ट मधेश/तराईको प्रतिनिधित्व भयङकर ढंगमा अगाडी आएकोमा सँधै बोल्दै आइरहेको शब्द 'समावेशीकरण' दोहोर्याइहाले सायद।